မော်ဒန်မှသည် ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းဆီသို. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မော်ဒန်မှသည် ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းဆီသို.
မော်ဒန်မှသည် ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းဆီသို.
Posted by taylay on May 7, 2010 in Drama, Essays.., History |3comments
ခင်ဗျားဟာ တကယ်လို. အသက် ၂၅ နှစ်မကျော်သေးတဲ့ မြို.ပြနေထိုင်သူ တစ်ဦးဆိုရင် ပို.စ်မော်ဒန် လူသားတစ်ဦး အဖြစ် ခင်ဗျားကို သတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်နေတဲ့ လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တေ့ာ ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား ၊ လှုပ်ရှားမှုများဟာ မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းမှာ နေသားကျနေလိမ့်မယ်။ ထိုနေသားကျနေမှုဟာ ထိတ်လန်.ကြောက်ရွံမှုတွေနဲ. နေထိုင်ရခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။
မြို.ပြ၀ါဒရဲ့ အားကောင်းပြင်းထန်စွာ လှုပ်ခတ်မှုမှာ ရန်ကုန်မြို.နဲ. မန္တလေးမြို.ကြီးနှစ်မြို.ဟာ အဓိကကျတဲ့ မြစ်နှစ်စင်းပဲ။ သမိုင်းမှာ မော်ဒန်လူသားတွေလို. ပြောဆိုသတ်မှတ်ရမယ့် တောက နေမြို.တက်လာကြတဲ့ လူတွေဟာ ရန်ကုန်နဲ. မန္တလေးရဲ့ ပင်မရေစီးတွေ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာကြတယ်။ တောက မြို.ရောက်လာတဲ့ ထိုတောသားများဟာ အသိအကျွမ်းနည်းပါးတယ်။ ဘယ်သူ.ကိုမှ မယုံရဲဘူး ။ ကိုယ့် ဒူးကိုယ်ချွန်စိတ်ဓါတ်နဲ. မြို.ပြမှာ ရပ်တည်ကြရတယ်။ သူတို. စိတ်ထဲမှာ သိတာတစ်ခုပဲရှိတယ်…. “ငါလုပ်ရင် ငါစားရမယ်” ။ အဲဒီ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ. ပြည်နေညှပ်ပြီး အသက်ရှုမ၀တဲ့ မြို.ပြကို မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းလို. သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။
မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းဟာ မြို.ပြက ထွက်ပြေးချင်နေတဲ့ လူ.အဖွဲ.အစည်းဆိုလည်း မမှားဘူး။ တောမှာ ရုန်းကန်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြို.ပြရောက်လာသူတွေဟာ အတိတ်မေ့ကုန်ကြတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခန္တာကိုယ် ပင်ပန်းမှုကို ကြောက်ရွံကြသူတွေဖြစ်တယ်။ မြို.ပြမှာ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေပေမယ့် သူတို.ဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြို.ပြက လွတ်မကျသွားအောင် မှီခိုတွယ်ကပ်ထားကြရတယ်။ ရွာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အမေကို လွမ်းကြပေမယ့် နောက်မျိုးဆက် တစ်ခုကို ထောက်ပံထားရပြီး ဖြစ်နေကြတယ်။
မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းရဲ့ သားသမီးတွေဟာ ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်လာကြရတယ် ။ မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းဟာ မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်း အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ဖို. ကြောက်ကြောက်ရွံရွံနဲ. စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီး ခေတ်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တည်ဆောက်လိုက် ရတာ ဖြစ်တယ်။ ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းကတေ့ာ မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းဆီက မွေးထုတ် ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပေမယ့် မော်ဒန်လူသားရဲ့ အမွေကို မဆက်ခံခဲ့ဘူး ။ ပို.စ်မော်ဒန် လူသားတွေဟာ သူတို. မိဘတွေရဲ့ အမြင် အယူအဆ အားလုံးနီးနီးကို ငြင်းပယ်လိုက်ကြတယ် ။ မြို.ပြဟာ ထိတ်လန်.ဖွယ် ကြောက်ရွံဖွယ် သူစိမ်းတစ်ယောက် အဖြစ်နဲ. မော်ဒန်လူသားဟာ ရင်နီးခဲ့ရတယ်။ သူတို.ဟာ မြို.ပြနဲ. သူစိမ်းတွေဖြစ်တယ်။ မြို.ပြဟာ သူတို.ကို မချစ်ဘူးလို. ခံစားမိကြပြီး သူတို.ဟာလည်း မြို.ပြကို မချစ်တက်ကြဘူး။
မော်ဒန်လူသားတွေဆီက မွေးဖွားလာတဲ့ ပို.စ်မော်ဒန်လူသားဟာ မြို.ပြကို ချစ်တက်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို.အတွက် မြို.ပြဟာ သူစိမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး ၊ ဘယ်တုန်းကမှ မဟုတ်ခဲ့ဘူး ။ သူတို.ဟာ မြို.ပြမှာ မွေးဖွားခဲ့ကြတယ် ။ မြို.ပြဟာ သူတို.နဲ. ဂေါ်လီရိုက်ဖက် ဖြစ်တယ် ၊ ဂွေ.လှိမ့်ဖက် ဖြစ်တယ် ။ သူတု.ဟာ မြို.ပြကို အထင်ကြီးတယ် ၊ မြို.ပြနဲ. အကြာကြီးခွဲပြီး မနေနိုင်သူတွေ ဖြစ်တယ် ။ မြို.ပြဟာ ဘယ်လောက်ထိ သူတို. ရင်းနှီးလည်းဆို မော်ဒန်လူသားတွေ စိတ်တောင် မကူးရဲတဲ့ “ လိုင်းကားကို ပြောစီးခြင်း” မျိုးကို ပြုကြတယ် ။ အဲ့လို အပြုအမူမျိုးကို မော်ဒန်လူသားဟာ သိမ်ငယ်စရာလို. ခံယူကြပေမယ့် ပို.စ်မော်ဒန်လူသားကတေ့ာ ဘယ်လိုမှ မခံစားရတေ့ာဘူး။ အဲ့လို အဖြစ်အပျက်က ပြန်ကြွားစရာတောင် ဖြစ်နေတက်တယ်။
ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်း ဟာ ဆင်ခြေဖုံးမြို.သစ်တွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်စည်ကားလာခြင်း နဲ. အင်တာနက် သုံးစွဲလာကြချိန်မှာ စတင်တယ်လို. ဆိုနိုင်တယ် ။ မြို.ပြရဲ့ တိုက်တွေနေရာမှာ ဆင်ခြေဖုံး မြို.သစ်တွေက ခြံနဲ.၀န်းနဲ. နေထိုင်မှုစနစ်ကို ပြောင်းရွှေ.လိုက်ကြရတယ်။ စာကလေး အိမ်လို တိုက်ခန်းတွေထက်စာရင် ခြံနဲ.၀န်းနဲ. နေနိုင်လာခြင်းဟာ သူတို. စိတ်ကို လွတ်လပ်စေတယ် ။ အဲ့ဒီလိုနဲ. ပို.စ်မော်ဒန်လူသားဟာ ရဲရင့်လာတယ် ။ အင်တာနက်နဲ. ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြောင့် သူတိ.ရဲ့ ရဲရင့်လာမှဟာ ပိုပြီးသေချာလာစေတယ် ။ သူတို.ဟာ အရာရာကို ခေါင်းငုံခံတက်ကြသူတွေ မဟုတ်တေ့ာဘူး ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မော်ဒန်မိဘတွေဆီက အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ အဖြစ် မော်ဒန်မြို.ပြရဲ့ အကြောင်းကို ခါးသီးနာကျဉ်းစွာ ယုံကြည်မိကြတယ် ။ မြို.ပြ လူနေမှုစနစ်ဟာ မကောင်းကြောင်း အရိုက်သွင်းခံထားကြရတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ. မြို.ပြလူနေမှုဘ၀ကို ကြောက်စိတ်ဟာလည်း ရှိနေခဲ့တယ် ။
ပို.စ်မော်ဒန်လူသားဟာ အမြဲလိုလို လှေနံနှစ်ဖက် နင်းနေကြသူတွေဖြစ်တယ် ။ သူတို.ဟာ ဆန်.ကျင်စိတ်နှစ်ခုကို တွဲပြီး ခံစားတက်ကြတယ် ။ သူတို.ဟာ လူတစ်ယောက်ကို အလွယ်တကူ ချစ်တက်ကြတယ် ။ အလွယ်တကူ မေ့တက်ကြတယ် ။ ရောက်ရှိနေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင် နေထိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်တယ် ။ သူတို.ဟာ မော်ဒန်ခေတ်မှာ မေ့လျှော့ထားတဲ့ သေခြင်းတရားကို ပြန်စွဲထုတ်လာကြတယ် ။ သူတို.ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ သူတို.ဟာ ခဏခဏ သေဆုံးတက်ကြတယ် ။ လူ.ဘ၀ကို စိတ်ပျက်ကြတယ် ။ အဲ့ဒီလိုနဲ. သူတို.ဟာ အင်တာနက်မှာ သနားစဖွယ်ဖြစ်အောင် ဟန်ဆောင်ကြတယ် ။ လက်တွေ.လူသားကတေ့ာ သေခြင်းတရားကို အလိုမရှိကြဘူး ။ လူဖြစ်နေရတာကို ကျေနပ်ကြတယ် ။ မြို.ပြက သူတို.ကို စွန်.ခွာသွားမှာ ၊ စွန်.ခွာ ထွက်သွားရမှာကို ကြောက်နေကြပြီ ။
ပို.စ်မော်ဒန်ခေတ်မှာ စာပေဈေးကွက်ဟာ နေရာရွှေ.ပေးရမယ့် အနေအထားကို ရောက်လာတယ်…. မဂ္ဂဇင်းတွေ ၊ စာအုပ်တွေ ၀ယ်ဖတ်တဲ့ သူဟာ မရှိသလောက်ပဲ… အင်တာနက်ပေါ်ကပဲ စာဖက်ကြတေ့ာတယ် ။ ပုံနှိပ်မီဒီယာဟာ ကြံရာမရဖြစ်ကုန်ကြတယ် ။ ပို.စ်မော်ဒန်ခေတ်ဦးမှာ အင်တာနက်ပေါ်က အနုပညာရှင်တွေဟာ အသက် (၂၃) မကျော်ကြသေးတာ များတယ်.. အဲဒီတေ့ာ. သူတို. အနုပညာဟာ (၁၅၀၀) ချစ် မှာပဲ သံသရာလည်နေ.. ဘလေ့ာဂ်တွေ ပေါ်ကာစ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ အင်တာနက်ပေါ်က ကဗျာတွေဟာ ရောမန္တိက အဆင့်ပဲရှိကြတယ်.. ၂၀၀၉ နှစ်စပိုင်းလောက်မှာ မော်ဒန်ကဗျာတွေ နေရာရလာတယ်..။ ပုံနှိပ်မီဒီယာက အနုပညာသမားတွေဟာလည်း အင်တာနက်ပေါ် တက်လာကြတယ်..။ အချိန်ကတေ့ာ ၂၀၀၉ ကုန်ခါနီး နှစ်လသုံးလလောက်မှာပေါ့ …. ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာလိုပဲ အင်တာနက်ပေါ် ပို.စ်မော်ဒန်ကဗျာတွေ စတင်နေရာယူလာတယ်။ (ထိုအကြောင်းကို ဆောင်းပါးသက်သက် ရေးပါဦးမည်။)
ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းမှာ အင်တာနက်ဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ နေရာပဲ.. လူတွေက စား၊၀တ်၊နေ၊ရေး ထက်တောင် အရေးကြီးတယ်လို. ခံစားလာကြတယ်.။ အရင်ခေတ်တွေတုန်းက လူဟာ တက္ကသိုလ်တွေ ၊ ကျောင်းတွေ အလုပ်တွေက တစ်ဆင့် အသင်းအဖွဲ.တွေ ဖွဲ.စည်းတည်ထောင်ကြတယ် ။ ပို.စ်မော်ဒန် လူသားတွေကတေ့ာ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ အသင်းအဖွဲ.တွေ ထူထောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ကြတယ် ။ အဲဒီနည်းလမ်းဟာ အသင့်တော်ဆုံး ၊ အထိရောက်ဆုံး ပန်းတိုင်ရောက်ဖို. အသေချာဆုံး ဆိုလည်း မမှားဘူး ။ မော်ဒန်မိဘတွေဟာ သူတို.ရဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ နောင်ရေးအတွက် လျှောက်လမ်းတွေ ဖောက်ပေးကြတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပို.စ်မော်ဒန်လူသားဟာ အဲဒီ တစ်ဦးတည်း တစ်ယောက်တည်း လျှောက်ရတဲ့ လမ်းကြောင်းကို မလိုက်ခဲ့ဘူး ။ သူဟာ အသင်းအဖွဲ.နဲ. အလုပ်လုပ်ရတာကို သဘောကျတယ် ။ ပျော်လည်းပျော်တယ် ။ ပို.စ်မော်ဒန်ခောတ်မှာ အသင်းအဖွဲ.နဲ. လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေသာ အောင်မြင်ကြတယ် ။ တစ်ဦးတည်း တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ခြင်းဟာ ပို.စ်မော်ဒန် လူ.အဖွဲ.အစည်းရဲ့ ပြယုဂ်မဟုတ်တေ့ာဘူး ။ အဲ့ဒီလိုနဲ. မော်ဒန်မိဘတွေဟာ ပို.စ်မော်ဒန်သားသမီးတွေကို စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်နေကြတယ် ။ ပို.စ်မော်ဒန် လူသားအတွက် အဲဒီစောင့်ကြည့်ခံရမှုဟာ သူတို.ခေတ်ရဲ့ ဟာသဖြစ်တယ် ။ အဲဒီပြသာနာဟာ ဒီနေ.ခေတ်ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး အားပြိုင်ပွဲလည်း ဖြစ်တယ် ။
ပို.စ်မော်ဒန်လူသားဟာ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတယ် ၊ နှစ်သက်တယ် ၊ သူတို.အတွက် ဘယ်အရာကမှ အရေးမကြီးဘူး ၊ ဘယ်အရာကမှ မခမ်းနားဘူး ။ မော်ဒန်လူသားရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ မြို.ပြက မိန်းမတိုင်းဟာ မိန်းမပျက်တွေ ဖြစ်တယ် ။ လိင်မှုဘ၀ဟာ မတရားလွတ်လပ်လာတယ် ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို အလှူလက်ဖက်လို ခွဲဝေသုံးစွဲကြတယ် ။ တည်းခိုခန်းက ထွက်လာတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်အမျိုးသားနဲ. ယှဉ်တွဲသွားရမလည်းလို. စောင့်မျှော်နေတယ် ။ အမျိုးသားဟာလည်း နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်သူနဲ. အဆင်ပြေနိုင်မယ်ဆိုတာကို လိုက်ရှာနေတက်ကြတယ် ။ မြို.ပြရဲံ လိင်မှုဘ၀ဟာ ရရစားစားပါပဲ ။ ဒီလိုနဲ. အိမ်ထောင်ပြုသူတွေနည်းပါးလာပြီး ကလပ်တွေဟာ 24 နာရီလုံး ရှိလာတယ် ။
ပို.စ်မော်ဒန်မြို.ပြ အကြောင်းပြောမယ်ဆို ချန်လှပ်ထားလို. မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ရှိမယ်.. အဲဒါကတေ့ာ ဂီတကြောင့် ကိုအခြေခံပြီး မြို.ပြလူငယ် လူတန်းစားနှစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်တာတယ် ။ တစ်မျိုးက ဟစ်ဟော့ပ်လူငယ်တွေ သူတို.ဟာ မြို.ပြလူငယ်ထုရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံလောက်ရှိတဲ့ လူများစုဖြစ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးက အနက်ရောင်တီရှပ်ဝတ်လူငယ်တွေ ဖြစ်တယ် ။ အနက်ရောင်တီရှပ်ဝတ်လူငယ်တွေဟာ လူနည်းစုဖြစ်သလို လူမုန်းခံရသူတွေလည်း ဖြစ်တယ် ။ အနက်ရောင်တီရှပ်ဝတ်လူငယ်တွေမှာ punk ၊ metal ၊ emo နဲ. Rock ခေါင်းစဉ်အောက်က ဂီတတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ ပါဝင်တယ် ။ သူတို.ဟာ ပြည်ပက ဆူညံပွက်လောရိုက်နေပြီး သာမာန်လူတွေ နားမခံသာတဲ့ အော်မြည်သံတွေကို နှလုံးသားထဲ ရိုက်သွင်းကြတယ် ။ သူတို. အချင်းချင်းကြားမှာ သူတို.ဟာ ရှုံးနိမ့်သူတွေ အဖြစ် အမြဲတမ်းခံယူကြတယ် ။ သူတို.ရဲ့ အခြေခံ အတွေးအခေါ်ဟာ နတ္တိဝါဒီနဲ. ဖြစ်တည်မှုဝါဒီတွေနဲ. ဆင်တူလာတယ်..။ သူတို. ဖတ်တဲ့စာတွေဟာလည်း အဲ့ဒီလို အကြောင်းတရားပါတဲ့ ဟာမျိုးတွေကြီးပဲ ။ ဟစ်ဟော့ပ်လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ကတေ့ာရှင်းတယ်… သူတို.ဟာ ဘ၀ကို ခပ်ပေါ့ပေါ့နေမယ် ခပ်ပေါ့ပေါ့ကုန်ဆုံးမယ် ..ဒါပဲ..သူတို.ဂီတမှာ ဟစ်ဟေ့ာပ်သမားတိုင်းဟာ အဆိုတော်ဖြစ်နေကြတယ် ၊ အဆိုတော်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ် ။ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဟစ်ဟော့ပ် လူငယ်ဟာ မြို.ပြကို ဖုံးလွှမ်းသွားနိင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ် ။
ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း သတ်မှတ်ချက်အရ ပို.စ်မော်ဒန်လူ.အဖွဲ.အစည်းဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စတယ်.. ဒီ လူ.အဖွဲ.အစည်းဟာ သက်တမ်းနုသေးတဲ့ အတွက် ရှေ.လျှောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို. ကိုယ်တိုင် ပါဝင်စီးမျောပြီး လေ့လာကြရမယ့် အရာဖြစ်ကြောင်း …..
ပိုစ်မော်ဒန်ဖြစ်ဖြစ် ဘာမော်ဒန်ဖြစ်ဖြစ် အိုဗာမော်ဒန်ဖြစ်ဖြစ်
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်မြင်ဘူးတာကွက်ကွက်လေး ကိုယ်သတိထားမိတားလောက်လေးနဲ့ ၀ါးလုံးရှည်၇မ်းသလို ကောက်ချက်မျိုးချဖို့ မသင့်ပါဘူး။